Jadwalka duulimaadka cusub ee South African Airlines: Isbeddellada, Kordhinta iyo Joojinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Jadwalka duulimaadka cusub ee South African Airlines: Isbeddellada, Kordhinta iyo Joojinta
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Ghana War Degdeg ah • Wararka Mauritius • News • Wararka Nigeria • Wararka Koofur Afrika
South African Airlines waa diyaarada seddexaad ee Isbaheysiga Star ee Afrika, waxaana weheliya Egypt Air iyo Ethiopian Airlines. Shirkadda Duulimaadyada ayaa maanta ku dhawaaqday isbeddello ka dhex jira shabakadeeda gudaha ee Afrika.
Ka dib markii si taxadar leh loo qiimeeyo tirada rakaabka ee socota, SAA waxay hagaajinaysaa jadwalkeeda duulimaadka si ay u daboosho shuruudaha rakaabka.
Shirkaddu waxay ka saari doontaa jadwalka adeeggeeda maalinlaha ah ee ku noqoshada Maputo ee Mozambique. Go'aanku wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo Diisambar 1, 2021, rakaabka haysta tigidhada waxaa la dejin doonaa duullimaadyada codeshare ee ay maamusho Mozambique Airlines, TM (LAM).
Simon Newton-Smith oo ah madaxa fulinta ku meel gaadhka ah ee SAA waxa uu yidhi, “Markii ay SAA dib u bilawday hawsheedii dhamaadkii Sebtembar, waxa aanu go'aansanay in aanu si joogto ah ula socono tirada rakaabka iyo dakhliga wadooyinka oo dhan. Baahida loo qabo adeegani ma ay buuxin wixii laga filayey, wakhtigan xaadirka ah, isbeddelkani waxa uu la jaan qaadayaa istaraatiijiyadayada ah in aan noqono maamul hufan oo mas'uul ka ah maaliyadda."
Newton-Smith wuxuu leeyahay qaadashada laba waddo oo cusub, Lagos oo ku taal Nigeria iyo Mauritius waxay ahayd dhiirigelin iyo adeegyo cusub oo meelo kale loo aado ayaa sidoo kale loo tixgelinayaa 2022.
Dib u habeynta kale ee la sameeyay Diseembar 21 iyo Janaayo 22 xilliga fasaxa, waxaa sabab u ah baahida la filayo oo gaabis ah maalmaha safarka caadiga ah, maadaama macaamiishu ay waqtigooda la qaataan qoysaska iyo asxaabta.
Duulimaadyada ku soo laabashada Accra ee Ghana waa la hagaajiyay mana shaqeyn doonaan 25ka Diseembar 2021 iyo 1da Janaayo 2022. Kinshasa, Duulimaadyada DRC waa la hagaajiyay mana shaqeyn doonaan 24ka Diseembar 2021 iyo 31st Diseembar 2021. Dhammaan Rakaabka waxaa la dejin doonaa maalinta xigta ee soo socota. duullimaadyada SAA ee la heli karo.
SAA waxa ay shaqaynaysay 4 maalmood usbuuciiba ilaa Lusaka laga bilaabo Sebtembar ilaa 30ka Noofambar 2021. SAA waxa ay qorshaysay soo noqnoqoshooyin dheeri ah oo ay ku duuli doonto 7 maalmood usbuucii laga bilaabo Diisambar, si kastaba ha ahaatee wax ka bedel dheeraad ah ayaa lagu sameeyay jadwalka si ay u shaqeyso 5 maalmood usbuucii laga bilaabo 1da Diisambar. Rakaabka ay saameysay waxaa la dejin doonaa duullimaadyada xiga ee SAA ee la heli karo.
Xusuusin Newton-Smith, "Ma jirto shirkad diyaaradeed oo jecel inay baajiso duullimaadyada, laakiin waxaa naga go'an inaan ku guuleysanno iyo waaritaanka shirkadeena, iyadoo aan buuxinayno shuruudaha macaamiishayada ee qiimaha leh. Waxaan ka raaligelinaynaa macmiisha wixii dhib ah ee soo gaadhay, waxaana kaalmo buuxda la siin doonaa dhammaan macaamiisha haysta tigidhka SAA ee duulimaadyada laga saaro jadwalka.
Macaamiishu waa inay tixraacaan xafiisyada soo saaraya si ay u caawiyaan." Rakaabka aan hadda doonayn inay safraan waxa laga yaabaa inay baajiyaan ballankooda oo waxay awoodaan inay helaan lacag celin buuxda (oo ay ku jirto cashuur) ama doortaan foojarka amaahda taasoo lagu siin doono qaabkii lacag bixinta ee asalka ahaa.
Newton-Smith wuxuu leeyahay macaamiisha ku ballansan wakiilka safarka waa inay si toos ah ula xiriiraan iyaga oo haddii tigidhada la keeno online ama xarunta wicitaanka ee SAA macaamiishu waxay kala xiriiri karaan Taageerada Ganacsiga ee SAA emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay] Macaamiisha ku ballansan xarunta wicitaanka ee SAA ee dibadda waa inay la xiriiraan xafiiska SAA ee deegaankooda.